Taariikhda - Laser Dahabka ah
Waxaan nahay shuraako ku ah macaamiisheenna xiriirkii ugu horreeyay illaa adeegga iibka ka dib. Maadaama aan nahay la-taliye farsamo, waxaan macaamiishayada kala hadlaynaa shuruudaha oo aan horumarinaa xalal kordhinaya waxtarka iyo qiime-kordhinta. Isugeyntiina - ISO 9001 silsilad geedi socod sharciyeysan - waxaan bixinaa xirmada xalka laser ee ugu soo jiidashada badan.
Mashaariic dheeri ah
2018 Waxaan had iyo jeer wadnaa wadada.
2017 wuxuu si guul leh u horumarey, oo si wanaagsan loogu dabaqay warshadaha.
2016 Goldenlaser aragga caqliga leh ee leh nidaamka madax-dual madaxbanaan ayaa la bilaabay, si guul ah ayaa loo adeegsaday warshadaha maqaarka iyo kabaha.
2014 Golden Laser ee Sales iyo Xarunta Adeegga ee USA iyo Vietnam si rasmi aasaasay.
2013 ayaa la sameeyay.
2012 nidaamka aqoonsiga camera goynta laser Fly iskaanka loogu talagalay warshadaha qalabka ciyaaraha ee dheeh-sublimation ayaa si guul leh bilaabay.
2011 Bishii Meey 2011, GOLDEN LASER wuxuu si rasmi ah ugu qornaa Suuqa Ganacsiga Koritaanka ee Shenzhen Stock Exchange (koodhka saamiga: 300220)
2010 Waxay ku lug leedahay sumadaynta sheyga birta iyo gooynta, VTOP - Shirkad laga sameeyay fiber laser
2009 ay soo saartay GOLDEN LASER ayaa la bilaabay.
Nidaamka wax lagu qoro ee otomatiga ah ee loo yaqaan 'Laser laser Laser' oo loogu talagalay ashyaa'da duugga ah ayaa la bilaabay.
Laydhka GOLDEN LASER marka hore 3.2 mitir mashiinka goynta laser-ka weyn ee CO2 ayaa la geeyay. Awoodda is-habeynta ee GOLDEN LASER ee Mashiinka goynta waaweyn ee loo yaqaan 'CO2 laser machine Machine' ayaa si weyn looga yaqaanaa warshadaha.
2008 Ku lug yeeshay warshadaha dharka wershadaha. Markii ugu horreysay ee laga qeybqaato soo bandhigidda wershadaha filterka si wanaagsan ayaa loo soo dhoweeyay.
2007 Buundada ugu horeysa ee laser-ka adduunka ayaa la siidaayay, iyada oo lagu guuleystey isku darka qumman ee kombiyuutarka iyo goynta laser.
Habka weyn ee 3D nashqadeynta mashiinka laser 3D ee diiradda saara ayaa la bilaabay.
2006 Kadib 3 sano oo cilmi baaris iyo horumarin ah, oo lagu soo rogay nidaamka qadka offline-ka oo la daabacay, kaas oo garta mashiinka laser-ka ee lagu maareynayo gudbinta xogta USB, gudbinta xogta internetka, iyo isku xirida mashiinada badan.
2005 Mashiinada goynta laser-ka weyn ee leh miisaska weelasha ayaa la geeyay wax soo saar, taas oo macnaheedu yahay suurtagalnimada soo-saar otomaatiga ah ee goynta goynta laser.
2003 GALVO laser taxane soosaarid caalami ah oo la sameeyay; Bixinta korontada laser lasii daayay.
2002 ayaa la bilaabay, jawaab celin fiican oo suuq iyo dibad ah.